Hello Nepal News » छिटो मोबाइल चार्ज गर्ने यी पाँच टिप्स, थाहा पाइराख्नुहोस्
दैनिक जीवनमा मानिसले मोबाइल फोनमा ब्याट्री नहुँदा वा समयमै चार्ज नहुँदा सास्ती झेलिरहेका हुन्छन् । कहिलेकाहीं मोबाइल चाँडै चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो बेला के गर्ने ? कसरी मोबाइलको ब्याट्री चाँडै चार्ज गर्न सकिन्छ ? यसबारे केही उपयोगी टिप्स यहाँ छन् :
प्रकाशित मिति १४ भाद्र २०७६, शनिबार ०६:२८